Weghachi tebụl ndị si na ọdụ data - Ntuziaka Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Weghachi tebụl ndị si na ọdụ data
Weghachi tebụl ndị si na ọdụ data
Mgbe ihichapụ ụfọdụ tebụl na ọdụ data Microsoft Access gị (.mdb ma ọ bụ .accdb) na ndudue ma chọọ ịghachite ha, ịnwere ike iji DataNumen Access Repair ka i scanomi .mdb ma ọ bụ .accdb faịlụ na-agbake ehichapụ tebụl site na faịlụ dị ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu agbake ehichapụ tebụl si Access mdb ma ọ bụ accdb faịlụ na DataNumen Access Repair, biko mechie Microsoft Access na ngwa ọ bụla nwere ike gbanwee faịlụ mdb ma ọ bụ accdb.
Pịa “Nhọrọ” taabụ, ma hụ “Naghachi ehichapụ tebụl” a na-enyocha nhọrọ.
Họrọ Faịlụ mdb ma ọ bụ accdb faịlụ ka arụzie:
Can nwere ike itinye aha mdb ma ọ bụ accdb filename ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
Site na ndabara, DataNumen Access Repair ga-echekwa ebe nchekwa data abanye na faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.mdb ma ọ bụ xxxx_fixed.accdb, ebe xxxx bụ aha isi iyi mdb ma ọ bụ faịlụ accdb. Ọmụmaatụ, maka faịlụ ndị mebiri emebi.mdb, aha ndabara maka faịlụ ahụ edozi ga-abụ Damaged_fixed.mdb. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
pịa bọtịnụ, na DataNumen Access Repair ga start na-enyocha ma na-agbake tebụl ndị ehichapụ site na isi iyi mdb ma ọ bụ faịlụ accdb. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mmezi ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ụfọdụ tebụl dị na mdb ma ọ bụ accdb nchekwa data nwere ike weghachite nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu mdb ma ọ bụ accdb nchekwa data na Microsoft Access ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ na-elele ma ọ bụrụ na ehichapụ tebụl na-natara nke ọma.
ebe i nwere ike pịa bọtịnụ iji hụ akụkọ zuru ezu banyere tebụl niile, mpaghara, tebụl, mmekọrịta na ihe ndị ọzọ enwetara, dị ka nke a:
Ma ngosi mbipụta agaghị mmepụta ofu faịlụ. Biko ịtụ ụdị zuru ezu iji nweta faịlụ ahụ edozi.